A Wanderer's Notebook: ပန်းပြတ်ခိုက်ကြုံ
စာမရေးတာ တော်တော့်ကို ကြာသွားပြီ ။ ခင်ရတဲ့ အမတစ်ယောက်က တွန်းအားပေးလို့ စာရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် ။ ကိုယ်အရင်ရေးတာတွေလည်း အားမရတော့ စာမရေးတော့ဘူးလို့ကို ပစ်ထားတာကမှ ဇာတ်လမ်းလေး ဖျစ်ညှစ်စဉ်းစားရင်း ကြိုးစားရေးလိုက်ရတယ် .. ။ လောလောဆယ် -ဖတ်ထားတာ မကြာသေးတဲ့ Haruki Murakami စာတွေရဲ့ Surrealism ဝါဒတွေ စွဲနေတော့ သည်အရိပ်အောက်မှာပဲ စာကထွက်လာတယ် .၊ ဘာပဲပြောပြော ကြိုးစားပြီးချရေးလိုက်ပြီ ၊ ခုတလောတော့ စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်ဖြစ်နေတယ် ။ ထုံးစံပဲ စာအုပ်တွေဖတ်တာများလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရလို့ စာမရေးချင်လေပဲ ။
ဘဝမှာ သည်တစ်ခါလောက် ရင်ခုန်မလိုက်မောစဘူး ဟုတင်သည် ။
မှောင်မည်းတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်ကို ဖြတ်သွားရင် မြင်ကွင်းတို့က ကြည်လင်လာသည် ။ လာစကတည်းကပင် အဓိပ္ပာယ်မသိပေမယ့် သာယာမှုတစ်ခုခုနောက် လိုက်နေရသလိုပင် ။ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုခုကလည်း မျက်မှောက်ထင်ချိန် နီးပြီတည်း ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်း၏ နိဂုံးဝယ် လူများ ဥဒဟို ဖြတ်သန်းရာ အဆောက်အအုံ တစ်ခုဆီသို့ နီးကပ်လာကြောင်း သတိထားမိသည် ။ ကျတော် စောင့်ဆိုင်းခြင်းကို မုန်းကြောင်း သူမသိဘူးလား ။ မသိလို့ ခုထိမရောက်သေးတာ သေချာသည် ။ သည်ရပ်ဌာနေ တွင် အချိန်ကို သိရန် နာရီတစ်လုံး မလိုအပ်ပါ ။ ကျတော်တို့ သည်နေရာမှာ တွေ့ရန်ချိန်းဆိုထားပြီးဖြစ်လို့ မှားစရာလည်း အကြောင်းမရှိ ။ ဘေးဘီတွင် ထင်လင်းသော နေရာအချို့ကို ငေးကြည့်ရင်း အချိန်ဖြုန်းဖို့ သာအကြောင်းရှိမည် ။ ငေးမောခြင်းထင် တွေးတောခြင်းသည် အချိန်ဖြုန်းရန်အကောင်းဆုံးမဟုတ်လော ။
မျှော်လင့်မထားပေမယ့် ကြားနေကြ အသံကြောင့် ရင်းနှီးမှုကို ခံစားလိုက်ရသည် ။ လှည့်ကြည့်တော့ နှင်းမြူပါးပါးမှာ စက်ဘီးတစ်စင်းတွန်းလာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အာရုံတက်၏ အရိပ်အငွေ့များ ယှက်သန်းနေပြီ ။
“နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် ညကလည်း စာကျက်တာ မပြီးသေးလို့ ၊ သည်နေ့ ဆရာသာ မေးရင်သေပြီပဲ ..၊ လာ သည်နေ့ငါတို့ နှစ်ယောက်ပဲ မကြူသည်နေ့မလာဘူးတဲ့”
သည်တော့မှ ရည့် အသံကိုကျက်မိသည် ။ နောက်ဆုံးငါ့ ရည့်ကို စောင့်နေတာပဲ ကျူရှင်သွားဖို့ .. ။ သူ့ကို မတွေ့တာ ကြာလှပါဘီလော … မေ့လုမေ့ချင် ဖြစ်နေပြီလေ.. ။ ကျတော်တို့ မနေ့က တွေ့ကြလို့လား .. ၊ ကျတော် စောင့်တာ သူကိုလား .. ဒါဆို သူ့ကို ကျတော်စောင့်ခဲ့တာကြာလှပါဘီကွယ် … ။
“နည်းနည်းနောက်ကျလို့ စိတ်ဆိုးနေတာလား၊ အစ်ကိုရော စာရပြီလား ၊ နောက်တစ်ပတ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် ငါ့မွေးနေ့ကျရင် မကြူရယ် နင်ရယ် ငါတို့ သုံးယောက်တစ်ခုခု သွားစားကြမယ်လေ .. နော် ၊ စိတ်မကောက်နဲ့တော့”
နောက်ဆုံးတော့ သူလာပြီလေ … စောင့်ဆိုင်းရတာ တစ်ခဏမကတာတော့ သေချာသည် ။ သူကို ကိုယ်စိတ်ဆိုးဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ် … ။ သူနောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ကိုယ့်ဆီကို ပြန်လာတာပဲ ။
“နော် … အစ်ကိုရယ် ၊ ဟုတ်ပြီလား”
မနက်ဖြန် မေလဲ့ နဲ့တွေ့ဘို့ ခုညကတည်းက ရင်ခုန်ရသည် ။
မေလဲ့က ကိုဦးကို သည်လောက်တောင်လွှမ်းမိုး ထားနိုင်တာပဲ ။ သည်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်ကတည်းက မေလဲ့နဲ့ မတွေ့ရသေး … သေချာထွက်ကြည့်ရင် ၂ လနဲ့ ၁၇ ရက်တောင်ရှိတော့မယ် ။ သည်လို အသေးအဖွဲတွေဟာ ပြန်စဉ်းစားတွက်ချက်ရင် သိပ်လွယ်ပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရင်ခုန်စေဖို့ သိပ်တာသွားတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၊ ၅ နှစ်လောက်တုန်းက မိန်းမတွေအကြောင်း သည်လောက် မသိတတ်တာ ကိုဦးညံ့တာပဲ … ။
သည်ည စာဖတ်ရင် ကဗျာတွေဖတ်ဖို့ သင့်မည်ထင်သည် ။ လရောင်ဆမ်းသော ချစ်သူ့အိပ်ခန်းဆောင်ကို ညဉ့်ယာဉ်ရထားဖြင့် တိတ်တဆိတ်သွားရောက်သင့်လေသလား ။ လေအလာ မွှေးပျံ့လွင့်မြူးသော ဆံနွယ်အရင်းမှ ရိပ်တရောင့်မြင်ရသော မေ့ရွှေလည်တိုင်ကြော့ကို နမ်းရှိုက်ခွင့် ငံလင့်ရမလား ။ အခုတော့ သည်လိုအတွေ့ မထူးပေမယ့် မောင့်မှာဖြင့်ရူးပြီမေ လို့ လိုက်မောစွာ ညည်းဆိုဖို့ပဲရှိ တော့မည် ။
မေလဲ့ နဲ့ ကိုဦးတွေ့စက ကိုဦးနှလုံးသားမှ ဒဏ်ရာသည်အက်ကြောင်းထင်ဆဲပင် ရှိသေးသည် ။ ထင်ပေါ်လှ သော မေလဲ့ကို သာမာန်ထက်ပို၍လည်း သတိမထားမိခဲ့ … ၊ ရူးမိုက်တုန်းပင်မို့ တစ်နေ့ဝယ် ဒဏ်ရာပေးခဲ့သူက ပြန်လည်ကုစားရန်ရောက်လာလိမ့်မည်မို့ အနာဖေးမတက်အောင်ပင် လွမ်းစကိုတွဲသီထားတတ်ဆဲ ။ ကိုဦး ရှုံ့ချခဲ့ဘူးသော သူများတွေ ဘာညာမသိတရားစာရွတ်သလိုပဲ … တစ်နေ့တစ်နေ့ လွမ်းချိန်ပေးကာ ကိုယ့်နှမကို တမ်းတရသည် ။
အဲသည်အတွင်းမှာပင် မေလဲ့ဘက်ကတော့ “ကိုမောင်မောင်ဦး” မှ “မောင်မောင်ဦး” ၊ “ကိုမောင်ဦး” …နောက်ဆုံး “ကိုဦး” လို့ အဖျားခက်ခေါ်သည်အထိရင်းနီးလာသည် ။ ကိုဦးတို့ ဆက်ဆံရေးကို ကာယကံရှင်တွေထက် သူများတွေက ပိုလို့ သတိပြုမိကြတယ်ထင်၏ ။ ကိုဦးသည် မရင့်မာသေးပြီမို့ တစ်ခါတစ်လေ မေလဲ့ကို ကွယ်ရာက တစ်စိမ့်စိမ့် ငေးတတ်တာက လွဲရင် သိသိသာသာ တပ်မက်ခြင်းမဖြစ်မိတာလည်း သေချာနေသည် ။ နောက် ကိုယ့်နှမဆီကမျှော်လင့်ခြင်းသည်လည်း အရိပ်အယောင်ပမာမျှ မမြင်ရသေးလို့မို့ မရနိုင်လေ မျှော်လင့်လေနှင့် နှောင်ကြိုးမဲ့လက်ရှိဘဝ ကို ကျေနပ် နေသလိုရှိ၏ ။
သို့သော် ကိုဦးလည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်မို့ မေလဲ့နဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ခွင့်ကို ကျေနပ်လာရသည် ။ ဘယ်နှယ့် တစ်ခါတစ်ခါမှာ အဖော်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သေးသည်မို့ ကျေးဇူးတတင်စွဲလမ်းရသေးသည် ။ မေလဲ့၏တည်ကြည်စွာ ချွဲနွဲ့တတ်သော အပြုံးချိုချိုကို တပ်မက်စပြုလာပြီ … ၊ ကိုဦး၏ ရှောင်တခင် ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့် ကျေနပ်မှု ကို မေလဲ့မျက်လုံးမှာ မြင်ရတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ဖြစ်တည်မှု ပိုမို လေးနက်လာသည် ဟုထင်ရ ပြန်သည် ။ နောက်ကိုဦးရဲ့ မျက်လုံးတွေကို မေလဲ့ စိုက်မကြည့်ရဲ့တာကြောင့် မျက်လုံးချင်းဆုံတမ်း ကစားရတာ ပျော်စရာထင်၏ ။ သည်လိုမိန်းမမျိုးနဲ့ လက်ထပ်ရရင် အသက်လုံး ယုယမှုတွေနဲ့ ပျော်နေနိုင်မှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်ရင်း အဆင်မပြေတဲ့လင်မယားစုံတွဲတွေကို သနားတတ်သေးသည် ။
ဒါပေမယ့် မေလဲ့ကိုယ့်ကို သဘောကျနေပြီရယ်လို့ အသေမတွက်နိုင်သေး ။ ကိုယ့်နှမတုန်းကလည်း သည်လိုပဲ မဟုတ်လား ။ မေလဲ့သဘောတူရင်တောင် ကိုဦးဖို့ ခုထက်ပိုပြီး နှောင်ဖွဲ့လာမှာကို စဉ်းစားသင့်သေးတယ်ထင်၏ ။ နောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မသေချာသေး … ၃၊၄ နှစ်သည် စိတ်ဒဏ်ရာကို မွေးမြူမထားလျှင် ကုသဖို့ အချိန် လုံလောက်နေလေပြီ ။ စနစ်တကျလုပ်တတ်သူမို့ ကိုဦးအတွေးတွေ နယ်ချဲ့ ချင်တိုင်းချဲ့ မိသည် ။
သည်တုန်းအဝေးမှာ ပျော်ရွှင်နေသည်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်နှမသတင်းလေးတွေ ကြိုကြားကြိုကြား ကြားရတတ်သည် ။ အိပ်မက်တွေမှာ ကို့နှမ နှင့်မေလဲ့ တစ်လှည့်စီရောလာသည် ။ မေလဲ့သည် ခုတလော ပိုလှလာသည်ထင်၏ ။ တစ်ခါတစ်ခါလမ်းလျှောက်သွားလျှင်ပင် မွှေးလွင့်၍ နူးညံ့မည်ထင်ရသည့် မေလဲ့ဆံနွယ်တွေကို ထိကိုင်မိ မတက်သတိမှားလာတတ်သည် … ။ မေလဲ့သည် ကိုဦးကို ခိုးစိုက်၍ စိတ်မရှည်စွာကြည့်တတ်ပြီ ၊ ကွေ့ဝိုက်ကာ စကားစတတ်လာပြီပဲ ။ ကိုဦးကတော့ တွေနေဆဲပဲကွယ် .. ။ အချိန်အနေ အချိန်အခါသည် လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ တွန့်ကြာသော ကိုဦးကို နည်းဗျူဟာ ပြောင်းလဲပေးဖို့ ကြိုးစားသည်ထင့် ။ နေ့စဉ်လိုလို လမ်းသင့်၍တွေ့နေကြ မေလဲ့သည် ကိုဦးအနားမှ ရုတ်တရက် အလှမ်းဝေးသွားရ၏ ။
ရိုဒင့်အကြောင်းကိုဖတ်တုန်းက သိပ်လှတဲ့ စာတစ်ပိုဒ်ကို ကိုဦးမှတ်မိဖူးသည် ။ ‘ယောက်ျားတစ်ယောက် အဖို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ သိရတဲ့ အချိန်ဟာ အဲသည်မိန်းမ သူ့ဘေးနားက ထွက်သွားတဲ့ အချိန်ပဲ’ တဲ့ ။ အဲသည်စကားလေးသည် အရင်တုန်းက အဓိပ္ပာယ် မသိပေမယ့် ခုတော့ တစ်ယောက်ထည်းထိုင်ပြီး မေလဲ့ကို သတိရတိုင်းတွေးတတ်လာသည် ။ မေလဲ့သည် ကိုဦးလက်လှမ်းလို့ မှီဆဲပါပဲကွယ် .၊ မေလဲ့နဲ့ တစ်ဘဝလုံးနေဖို့ ကိုဦးမှာ အခွင့်သာဆဲပါပဲ … ။ မေလဲ့ကို ကိုဦးကြိုက်တာတော့ အသေအချာပါပဲ .. ၊ မေလဲ့ကိုယူရင် ကိုယ့်နှမနဲ့ သူ့ချစ်သူ စုံတွဲကို ကောင်းကောင်းကြီး ယှဉ်လို့ နိုင်နိုင်တာပဲ .. ၊ မေလဲ့ ရုပ်ရည်၊ ပညာ ၊ အဆင့်အတန်းက ယောက်ျားတိုင်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှာပါ ။ ဟင့်အင်း ဒါက ယောက်ျားဈေးတွက်ကြီးမဟုတ်လား ။ မေလဲ့ကို ကိုဦးချစ်သလား ၊ မောင့်နှမလိုတော့ ရင်မခုန်တတ်ဖူးလို့ထင်သည် ။ ဒါပေမယ့် ခုလိုစိတ်ကူးခွင့်ရရင် အရင်ကကိုဦးအနားမှာ ရှိတတ်တဲ့ မေလဲ့ ကိုပဲ သတိရတတ်သည် ။ ဒါဆို ချစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ လုံလောက်ရဲ့လားကွယ် ။ ကိုဦးမေလဲ့ ကို ချစ်မိနေပြီ မဟုတ်လား ။
“သြော် မေလဲ့ရယ် ၊ ဟုတ်လား”
ကိုယ့်နှမ ရည့်ကို မြင်တော့ ဆွတ်ပျံ့ မှုကိုပြန်ရသည် ။ ကိုယ်ခံစားဖူးချင်တဲ့ မေ့လောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အချစ် ဝတ္ထုတွေထဲက ခံစားမှုမျိုး ။ ဝေဝါးနေခြင်းသာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်၏ ။ ကိုယ် ရည့်ကိုမတွေ့တာ နှစ်ချီပြီထင်သော်လည်း သူကတော့မနေ့တနေကလိုပြောနေသည် ။ ရည့် ကိုယ့်ကိုစောင့်ရင် အိပ်ပျော်နေတာလား ၊ ရည့်ချစ်သူရော မပါဘူးလား ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကို ကိုယ့်နှမ မကြားချင်သည့် စကားမဆိုဝံ့အောင်လှည့်စား ထားတာလား ။
“ကဲ ကိုမောင်မောင်ဦး သွားကြမယ်..”
စက်ဘီးစီးရင်း ပတ်ဝန်းကျင်သည်မှုန်ဝါးလာသည် ။ ရှေ့မှာထက်ဘာမှ ပိုပြီးမမြင်ရ … ၊ အမှောင်ဝေတဝါးထဲ ကိုတိုးသွားရင်း နှင်းမြူတို့ပြည်စ ပြုလေပြီ ။
“အစ်ကို နင်ပြောင်းသွားတယ်နော် … အရင်ကလိုမဟုတ်ဘူး စကားနည်းသွားတယ်”
ဟန်ဆောင်တားတာမောလို့ထင်ရဲ့ ရည်က လက်ရှိအချိန်ကိုပြန်ဆွဲတင်သွားသည် ။ မတွေ့ရတာ ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီကွယ် ကိုယ်လည်းရည်နဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ လူပျိုပေါက်လေးမှ မဟုတ်တော့တာ … ။ မဟုတ်သေးဘူးထင်သည် ၅ နှစ်ဆိုတာ အမှန်ကသေချာပေမယ့် ခုလိုမျိုးတော့ မကြာမကြာတွေ့ ဖူးသားပဲကွယ် ။ မတွေ့တာတော့ ကြာပြီ … ခုတလော ကိုယ့်စိတ်ထဲမယ် မေလဲ့ကို သာစိုးမိုးလို့ နေသည် … ။
ကိုယ်သည် စကားစရှာမရသလို တစ်အ၍နေသည် ။ ရည့်ချစ်သူဘယ်မှာလည်းဟင်လို့ မေးလိုသည့်မေးခွန်းကိုပဲ တိုက်ရိုက်မေးလိုက်ရမလား ၊ သည်အတွင်းမင်းကိုယ့်ကို သတိမရဘူးလား ၊ နောက် သည်လို ကိုယ်နဲ့ ရှောင်တခင်တွေ့ကြတာရော အမှတ်ရရဲ့လားမေးချင်သည် ။
“အရင်ကလို ငါတို့ ၃ ယောက် ကျူရှင်အတူတူသွားကြတာ မှတ်မိသေးတယ် ၊ နောက်ဆရာ့ဆီမှာ စာဖြေတော့ အောက်ကနေကူးချကြတာ .. ၊ မကြူကြီးလည်း မတွေ့တော့ဘူး …. ၊ နင်လည်းအရင်ကလို အတ္တကြီးတုန်းပဲလား အစ်ကို ….နောက် ရည်းစားရော ရပြီလား ၊ အိမ်ထောင်ရော ကျနေပြီလားဟင်”
ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ ရည်းစားရှိရမည့်အရွယ် .. ၊ အိမ်ထောင်ပြုရမယ့် အရွယ်ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသည် ။ ကိုဦး အရွယ်မလွန်သေးပေမယ့် မေးငေါ့တတ်တဲ့ ခင်မင်သူတွေ ပေါနေပြီ ။ တစ်ခါတစ်ခါလည်း သူတစ်ပါးချစ်သူရည်းစားတွေကို ငေးမောရင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို သတိရတတ်သည် ။ ဒါ ကိုယ့်နှမလား … မေလဲ့လား .. ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းများတွင် စိတ်၏တိကျသော အဖြေကို စောင့်ဆိုင်းရမှု သည် စိတ်ပျက်စရာ အကောင်းဆုံးလို့ ကိုဦးထင်သည် .. ။
အင်မတန်ပင် လွယ်လွန်းသောစကားတစ်ခွန်းဖြစ်မည် … ။ နောက်ဆုံး မိန်းကလေးက မျက်လွှာလေးချကာ အဖြေပေးလေတော့ ရှက်နေရှာသော ချစ်သူ့ တုန်ယင်နှုတ်ခမ်းကို စုတ်ယူသော ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားများလည်း ပူနွေးရွှန်းစိုနေဖို့ အနည်းဆုံး လိုမည် ။ ရှေ့ဆက် ခရီးအတွက် လိုအပ်ချက်များ .. ဝတ္တရားများကို ယောက်ျားတစ်ယောက် သည်းခံနိုင်ရန် မျက်ကန်းချစ်စိတ်ကိုပင် အားပြုရပေတော့မည် . .. ၊ သည်မျက်ကမ်းချစ်စိတ်မျိုး မေလဲ့အပေါ်ရှိရဲ့လား ကွာ… ။
အနည်းဆုံး စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တော့ ရှိမည် .. မနာလိုပြ ၊ ချုပ်ချယ်ပြ … ၊ နောက် တစ်ယောက်အလို တစ်ယောက်ကလိုက် ၊ သည်လိုမျိုး ကို လက်ခံနိုင်ဖို့ တစ်ဦးတည်းဖြစ်တည်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ ကိုမောင်မောင်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်လိုစိတ်အားထုတ်မလဲ .. ။ အသက်လေးက ကြီးလာပြီထင်၏ ။ မောင့်နှမ တုန်းကတော့ သည်လောက်မတွေးမိခဲ့ဘူး … ။ ယောက်ျားလေးတိုင်း သည်လိုတော့ မတွေးကြဘူးထင်ပါရဲ့ .. ။ သည်လိုပဲ နေကြရင်းအကြောင်းသင့်တော့ လက်ထပ်လိုက်ကြ … ဒါမှမဟုတ်လဲ ကွဲကြ ၊ ပြဲကြ .. နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းကြနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် သည်လို သတ္တိမျိုး ကိုဦးလိုချင်သည် ။ ခက်သည်က အားကျတတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ကြီးဝင်ပြီး ကိုယ်ကမှ ချစ်တတ်တယ်ထင်လေတော့ အဲလို လူတွေကိုပဲ သနားရသေးသည်.. ။
ခေတ္တခွဲခွာ ရခြင်းသည် စိတ်ကိုညစ်နွမ်း စေမှုဖြင့် ဝေဝါးသေးသော်လည်း တိကျသော အဖြေကိုတော့ ပေးတတ်၏ ။ ကိုဦးဘေးမှာ မေလဲ့ကို အမြဲတမ်းတလို့ မရနိုင်တော့ သည်မှ တကြိုးတစား သွားတွေ့ရခြင်းဖြင့် သာယာစေခဲ့၏ ။ ညအိပ်မက်များမှာ ကိုယ့်နှမရုတ်တရက်ကွယ်ပျောက်လျက် မေလဲ့သည် စိုးပိုင်ခြင်းဖြင့် ကိုဦးကို နိုးတစ်ဝက်အိပ်မက်မက်စေခဲ့သည် … ။ သည်လိုတော့ ကိုယ့်အချစ်ကို ဖွင့်ဟဖို့ အချိန်တန်လေပြီ .. ။
ကိုဦး တွေ့ချင်သည်ဆိုတော့ မေလဲ့လိုက်လျောမြဲ ။ အေးအေးစကားပြောချင်လို့ပါလို့ ကိုဦးပြောတော့ မေလဲ့တစ်ဖက်က ရင်ခုန်လေမလားမှန်းကြည့်ရသည် … ။ မေလဲ့ ကိုတွေ့ဖို့ ရုပ်ရည်အပြင်အဆင်ထင် ပိုင်းဖြတ်မှု စိတ်တစ်ခုတည်းသာ ပိုင်နိုင်ရင် စိတ်ချသက်သာစေမည် ။ ဘာလိုလိုနဲ့ မနက်ဖြန် မေလဲ့ နဲ့တွေ့ဘို့ ခုညကတည်းက ရင်ခုန်ရသည် ။ နက်ဖြန်ကိုယ့်ကို စောင့်နေမယ့် မေလဲ့ကို သည်ညအိပ်မက်ထဲမှာ ပင် အစမ်းကြိုတင် ချိန်းဆိုလေ့ကျင့်ချင်လာပြီ ။
ဝိုးတဝါးမြူတို့ အလွန်တွင် လှပသောရှုမျော်ခင်းသည် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေါ်လာ၏ ။ အချိန်သည်ကုန်လွန်မှု မြန်သလို ရွေ့လျားမှုတော့ မရှိ။ ကျူရှင်သွားရင်း ကျူရှင်တတ်ခဲ့ရသည့် ဘဝမှာ တမျှော်တခေါ်ဝေးကွာ ခဲ့ပြီထင်မိ၏ ။
ကိုယ့်ရင်သည် ဆွတ်ပျံ့ ဆဲ ကိုယ့်နှမ ရုတ်တရက်ဝေးကွာပျောက်ပျက်သွားမည်ကို စိုးကာ အတွေးကိုပင် ရဲရဲမတွေးဝံ့ ၊ ကိုယ့်နှမသည် တွေ့စကလို ဗိုလ်ကေမဟုတ်တော့ပဲ ကိုယ်သဘောကျသည့် ကျောထက်ရှည်သော ဆံပင်ကို ကလစ်တစ်ခုဖြင့် ရုတ်တရက် နှောင်ကာ မျက်လွှာစွန်းဖြင့် စိုးရိမ့်သူ့ မျက်နှာကို ငေးကြည့်နေသည် .. ။
“ပြောပါဦး ကိုမောင်မောင်ဦးရဲ့ ဘာတွေများ သည်လောက်တောင် ကြည့်နေတာတုန်း .. ငါ့ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ကရည်းစားကို သတိရနေတာတုန်း … မျက်နှာထားက ရောဘာကို စိုးရိမ်နေတာတုန်း တော်ပါ ငါစတာ သည်နေ့ ကျူရှင်မှာ စာမမေးပါဘူး ..”
“ရည် မင်းငါပြောကိုတာကို အရေးမထားဘူးလား ”
“ဘာလဲ .. အစ်ကို”
“ငါမင်းကို ချစ်နေတယ် … ဟုတ်တယ် ခုလည်း ချစ်ဆဲပဲ ..၊ မင်းငါ့ကို ငြင်းထားတာတောင် အခြားလူဆီ စိတ်မပြောင်းနိုင်ပဲ တိုက်ဆိုင်ရင်မင်းကို သတိရနေတယ် နောက် မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာတွေ … အနည်းဆုံး မင်းကို ချစ်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ မင်းသည်လောက် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်သင့်ဘူး …”
“ငါ့ အစ်ကိုကို ပြောပြီးပြီပဲ ငါ့မှာ ချစ်သူရှိတယ်….၊ နောက်နင်လည်း သည်လောက် ၅ နှစ်တာမှာ ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် မတွေ့သေးဘူးလား ၊ နောက်နင်ငါ့ကို ချစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး .. ၊ နင့်အချစ်အတွက် ကုန်ရမယ့် ဝတ္တရားတွေကို စိတ်ကူးထဲမှာ ထားပြီး ရှောင်ပုန်းချင်တာပဲ ၊ နင်ငါ့နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်လို့ အချိန်ကြာရင် နင်ပျော်မယ်ထင်လားအစ်ကို ….”
“မင်းသက်သက်ငါ့ကို အထင်သေးတာပဲ ၊ ယောကျာ်းတစ်ယောက် အချစ်ကိုလက်မခံပဲနဲ့ အဲသည်ယောက်ျားကို မချစ်တတ်ပါဘူးလို့ မင်းမျက်စိမှိုတ်ငြင်းနေတာ … ၊ ကိုယ့်စိတ်မှာ မင်းကိုအမြဲထားပြီး လှမ်းမရတဲ့ အဖြစ်ဟာ ဘယ်လောက်ရင်နာရလဲမင်းသိလား”
“ဒါ နင်ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဒုက္ခရှာတာပဲ.. ၊ နောက် နင့်ဘာသာနင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုချစ်ပြီး သူတပါးကို မချစ်နိုင်လောက်အောင် အတ္တကြီးတာမဟုတ်လား ၊ နင့်ကို ငါ လုံးဝ သတိမရပါဘူးလို့ ငါငြင်းရင်တော့ ငါ့ကိုယ်ငါ လိမ်တာပဲ ၊ အစ်ကို ငါနင့်ကို နင်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးနားလည်တယ် ၊ နင်ရဲ့ စကားတွေကို ငါမမေ့သလို နင့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ငါမမေ့ဘူး ၊ … နင်ဟာ သားနဲ့ မယားနဲ့ နေနိုင်လောက်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူး … နင့်လက်ရှိဘဝထင် နင့်စိတ်ကူးထဲက ဘဝကို အသားပေး ၊ အချိန်ပေး ချင်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး …. ဒါကြောင့်မို့ နင်ငါ့ကို စိတ်ထဲမှာ ထားပြီး နင်လက်ရှိတိုးတက်ရေးကို ပဲ အာရုံစိုက်နေနိုင်တာမဟုတ်လား …၊ နောက်နင်နဲ့ ငါ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ရော ဘယ်လိုဖြစ်မယ်နင်ထင်လည်း ၊ နင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာတွေကို ငါတောင်းဆိုတာနဲ့ နင်ငါ့ကို စိတ်ပျက်မှာပဲ ၊ … မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်လို့ အမြင်ကျယ်ပါစေ ..၊ ငါကတော့ ကိုယ့်ကိုတစ်ကယ်ချစ်ပြီး အနည်းဆုံး အဲသည်အချစ်ကြောင့် ကိုယ်ကလည်း ပြန်ချစ်နိုင်မယ့် ယောက်ျားကိုပဲ လိုချင်တယ် .. သေချာတာက နင်သည်လို ယောက်ျားမဟုတ်ဘူး ”
“မင်း ငါ့ကို မခဲနဲ့ပါနဲ့ .. တစ်ဖက်သက်ပြောတယ်ပဲ ဆိုဆို ဒါတွေဟာ ငါ့အတွက်အမှန်ဘဲ …. ငါမင်းကို တန်ဖိုးထားချစ်ခဲ့တာ .. နောက်မင်းငါ့အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားတာ .. အဆိုးဆုံးကတော့ မယုံတာပဲ ..၊ ဒါထက်ပို ပြီး ငါရင်နာရတာက ငါ့အချစ်ကို မင်းယုံအောင် သတ်သေပြဖို့ ငါမစွန့်လွှတ်ရဲ့ ခဲဘူး ၊ မင်းပြောတာဟုတ်မယ် ငါ့ဘဝက အားလုံးအဆင်ပြေနေတော့ သည်ဘာမဟုတ်လေးကို ပုံကြီးချဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်ဆို တာ ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ငါ့အတွက် အရေးမပါတာမဟုတ်ဘူး ၊ လောကမှာ ဦးဆုံးချစ်ရသူက ငြင်းခံရတဲ့ ယောက်ျားပေါင်း ရေတွက်ရအောင် ရှိကောင်းရှိမယ် ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံ ငါ့လိုခံစားရမယ်မထင်ဘူး ၊ မင်းတစ်နေ့ ငါ့အနားပြန်ရောက်လာမယ်လို့ ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ် ….အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းယုံ ကြည်ချက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဆို မင်းလှောင်ဦးမှာလား …၊ မင်းကို ငါမေ့ထိုက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ အဲမင်းပြောသလို စွဲလမ်းမှုဆိုတာ ငါ့လိုလူအတွက် လွယ်လွယ်မပျောက်နိုင်ဘူး .. မင်းကို ငါအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့တာနဲ့ မေ့သင်တယ်လို့ ထင်တဲ့ အတိတ်တစ်ခုဟာ လွင့်ပျောက်မသွားဘူး”
“အစ်ကို သည်အတွင်းမှာ ချစ်တဲ့ သူကိုမတွေ့ဘူးတဲ့လား … မိန်းကလေးဆို တစ်ယောက်မှ နီးစပ်မှုမရှိဘဲ နေလာတာလား ၊ ဘယ်မိန်းမကိုမှ ရင်မခုန်ဘဲ.. စိတ်တောင်မကူးဘဲနေလာတာလား”
“ကိုယ်မိန်းကလေးတွေ မတွေ့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ်မင်းထက် သဘောကျလောက်တဲ့မိန်းကလေး တွေ အများကြီးပါ .. ခက်တာက ကိုယ်သူတို့ကို ချစ်လို့မရဘူး … ၊ သူတို့ကို ကြင်နာပြလို့ရတယ် တွဲပြလို့ရမယ် နောက်ဆုံးကွာ ကောက်ပြီးလက်ထပ်ယူလို့ ရမယ် ၊ ဒါပေမယ့် မျက်ကန်းအချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်လို့မရတော့ဘူး … အဲဒါဘာကို အပြစ်တင်ပြီး ငါ ဘယ်လိုပြင်ရမှာလည်း နင်ပြောစမ်း … ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်ငါတွေဝေတယ် ကိုယ်ချစ်မချစ်မသေချာတဲ့ ဘယ်မိန်းမကို မှ ငါမရွေးချယ်နိုင်ဘူး …. ။”
“အစ်ကိုရယ် နင်ကငါထင်တာထက် အတ္တပိုကြီးတာပဲ … ၊ နင့်အချစ်ကို မခံစားတတ်နိုင်အောင် အတ္တကြီးတာပဲ ၊ နောက်တွေဝတတ်တယ် ၊ … အချစ်မှာ ငါ့ကိုယ်တွေ့အရတော့ သဘောကျတာ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်… သူ့ကိုချစ်တာ အမှန်ဆုံးပဲလို့ ယုံကြည်ပြီး တွေဝေမှု ကင်းကင်းနဲ့ သူ့အလိုလိုချစ်သွားတာပဲ ၊ အစ်ကိုပေးလို့ပဲ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ အချစ်ရဲ့ဦးဆုံးဖြစ်တည်မှုမှာ အရောင်မျိုးစုံပါတယ်တဲ့ .. Red- Hot , Green –Comfortable , Blue –Romantic နောက် Pink – Cute တဲ့ ဒါပေမယ့် အချစ်ဟာခိုင်မာသွားတာနဲ့ ခုဏက အရောင်စုံပေါင်းစပ်သွားပြီး အဖြူရောင် ပဲဖြစ်သွားတယ် .. ၊ အခု ငါ့လက်တွဲဖော်ကို သည်လိုခံစားချက်သက်သက်နဲ့ လက်ခံခဲ့တာ … ၊ သူ့အရင် ရည်းစားလည်း ထားခဲ့ပါတယ် .. ဘယ်လိုပဲပြောပြော အဲသည်ရည်စားတုန်းကလည်း ငါတကယ်ချစ်တယ်လို့ ခံစားရလို့လက်ခံခဲ့တာ …. ချင့်ချိန်တာဆိုလို့ အမေတို့များ သိမလား စိတ်ပူတာပဲရှိတယ်”
“ငါစာ သိပ်ဖတ်အောင် အစ်ကိုပဲလုပ်ပေးခဲ့တာပါ ..၊ နောက်တစ်ခုက မသေချာပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို နင့်အတ္တကြောင့် ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ ….နင်တစ်နေ့ချစ်တတ်လာဖို့ ငါဆုတောင်းပေပါ့မယ် …”
ပတ်ဝန်းကျင်သည် ရုတ်တရက်လင်းလာသလိုရှိ၏ ။ စိတ်ထင်သေချာသော ဆုံးရှုံးမှုသည် စတင်လာပြီ ။ ကိုယ့်ရင်တွေ သိပ်ခုန်လာပြီထင့် ။ ဝေဝိုးစွာ လွင့်ပြန်နေသော အမှောင်ကို ဖမ်းဆုတ်ရဲဆေးတင်ရင်း ကိုယ့်နှမကို ဖက်လို၏ ။ မွှေးကြူသော်လည်း ထိတွေ့၍မရသော ၊ အကောင်အထည်မရှိသော်လည်း အသိရှိသော ခန္ဓာ တစ်ခုသည် ရုတ်တရက် ခပ်သောသောရယ်သံနှင့် ပျက်ပျယ်စပြုလာသည် ။ မှောင်ပိန်းသောဆံပင်ချည်များသာ ကိုယ့်အပါးမှာ ကျန်ရစ်သည်ထင့် ။ ကိုယ့်နှမသည် ဆံပင်များကို သိမ်းရုတ်ရင်း ကိုယ့်ကို အလင်းထဲသို့ ဆွဲနှစ်ပစ်ခဲ့၏ ။ ကိုယ့်နှမကြောင့် ကျရသည့် မျက်ရည်စများကိုပင် ပိုးသားဆံချည်တို့ နှင့် သိမ်းသုတ်ပေးခဲ့သေးတာ ကျေးဇူးတင်စရာပဲ ။
နောက်တစ်နေ့မနက် ကိုဦး မေလဲ့ဆီရောက်တော့ အိပ်ချင်စိတ်ကမပြေသေး ။ ညက အိပ်မက်မက်သည်ပင် အိပ်ပျက်ခြင်းထက်ဆိုးကာ အိပ်ရေးမဝသည်ထင့် ။ မေလဲ့သည် အထူးသဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည့်တိုင် ကိုဦးအတွက် မကလက်ပဲ တင့်တယ်သော ယှဉ်တွဲခေါ်ငင်စရာ ၊ ပွဲလယ်တင့်စရာပင်ကောင်း၏ ။
“ကိုဦး ကြည့်ရတာ မလန်းမဆန်းနဲ့ ညက ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နေလို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူး ညက စာဖတ်ရင်းအိပ်သွားတာ နည်းနည်းအိပ်ပျက်သွားတယ် .. ၊ ဒါထက် အပြန်ကျ လိုက်ပို့မယ်လေ”
“နေပါစေ တကူးတက …”
“မဟုတ်ရပါဘူး ကိုယ်လိုက်ပို့ချင်လို့ပါ …”
မေလဲ့သည် နားလည်ပေးသလိုပြုံး၏ ။ သည်လိုနားလည်မှုကို ကိုဦးချစ်တာပဲ ။ အချစ်ဆိုတာ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ပွတ်စားသွားတဲ့ အခါမှာ နားလည်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား ။
“ဒါထက့် ကိုဦး လဲ့ကို ပြောမယ်ဆိုတာ.....”
“အော် … ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်လည်း မေလဲ့ကိုတွေ့ချင်နေတာနဲ့ ……”
“လဲ့နဲ့ ကိုဦးတောင်မတွေ့တာ ကြာပြီ .. ၊ ဒါထက် ဟိုတနေ့က စိုးတို့နဲ့တွေ့လို့ ကိုဦးကိုတောင်မေးသေးတယ် ၊ လဲ့နဲ့လည်း မတွေ့ဘူးပြောတာမယုံကြဘူး .. ၊ လူတွေကို ဘာများထင်နေလဲမသိ …”
“သူများတတွေ ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ ၊ သူတို့က မေလဲ့မို့ သည်လောက်ပြောတာ ကိုယ့်ကိုဆို ရစရာမရှိအောင် စကြတာပဲ .. ၊ ”
“ဟားဟား …. ကိုဦးကလည်းပြောစရာဖြစ်အောင်နေတာကို … မေလဲ့ကို သိပ်လွမ်းနေတယ်ဆို”
“ဒါကတော့အမှန်ဘဲ … ဒေါ်ကြီးစိုးတို့ က ပြောသွားတာလား”
“အမယ် ထားပါ ၊ …ဒါထက်အမေတို့နဲ့ ဖုန်းဆက်တော့ပြောသေးတယ် … သမီးမှာချစ်သူတွေ ဘာတွေရှိရင် ပြောတော့တဲ့ .. မမကလည်းပြောတယ် သူပြောပေးမယ်တဲ့ လဲ့မျက်နှာပူရင်လေ … ၊ လဲ့ ကတော့ ပြောလိုက်ပါတယ် စိတ်မဝင်စားသေးပါဘူးလို့ … တကယ်ဆို စိတ်ရှုပ်စရာ ကိုဦးရယ် ….”
“ဟုတ်ပါတယ် .. ကျတော်တို့ အရွယ်ဟာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြည့်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမှာပဲ .. ၊ တစ်ခါတစ်ခါ သည်လို ကိစ္စမျိုးက စိတ်ရှုပ်စရာ .. ၊ ကိုယ်တို့ငယ်ပါသေးတယ် နောက် မေလဲ့လည်း မဟိုင်းသေးပါဘူးကွယ် … ”
မေလဲ့ဆီမှ သက်ပြင်းချသံ သဲ့သဲ့ကြားရ၏ ။
ကိုယ့်နှမပြောခဲ့တာ သိပ်မှန်၏ ။ ကိုဦး အလွန်တွေဝေတတ်လေသည် ။ ။
( သြဂုတ် ၂၆ ၂၀၁၀ ၊ 1:05 AM)
Posted by Aung Phyoe at 01:06
အောင်ဖြိုး စာတွေ ကြိတ်ဖတ် နေတော့... လက်ရာ တွေ လည်း.. တက်လာ တာပေါ့..။ တကယ်ပါ.. လက်ရာသန့်သန့်လေးပဲ..။ ကြိုက်တယ်..။ ဆရီယဲလ် ခဏ ထား..ဗမာလိုပဲ ရိုးရိုး ပြောရရင်.. ကိုဦး နဲ့ စိတ် ထဲကို..ခဏ ရောက်သွားတယ်။
တချက် ကတော့... နာမယ်လေး တွေ ရွေးထားတာရယ်.. အရေးအသား တချို့ လေးတွေ ရယ်က.. ကြည်အေး အငွေ့ လေး တွေ.. မွှေးနေတယ်။ ဒါကလည်း.. အမြဲ ဖတ်နေတော့..မဆန်းဘူး ထင်ပါတယ်။
၀တ္တု တို လေးတွေ.. ဆက်ရေးပါ လို့.. အရင်းခံ စိတ် နဲ့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. အောင်ဖြိုး..း)
26 August 2010 at 11:33
အဲဒီ့ထဲက character ကို အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကေ ။
အချိန်ရရင် စိတ်ကူးရရင်ရေးပါမယ် လောလောဆယ်တော့ ဖတ်တဲ့ဖက်ပဲ အားသန်နေတယ် .. ဖတ်သင့်ပြီး မဖတ်ရသေးတဲ့ စာတွေ ၊ ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ မအားနိုင်ဘူး :D
To K.N >> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ Relationship တိုင်းမှယယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေထက် အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို အတ္တပိုကြီးတတ်ကြတယ် ထင်တာပဲ :)
relationship တစ်ခုမှာ ယောကျာ်းတွေဟာ မိန်းမတွေလောက် မပြတ်သားတာ၊ တွေဝေတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ စဉ်းစားမိတာ ခဏခဏပဲ။
ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးလို့လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။း)